နွားနို့သောက်မယ်ဆိုရင် . . . – Healthy Life Journal
နွားနို့သောက်မယ်ဆိုရင် . . .
Posted on မေ 22, 2018
မေး ။ နွားနို့ကို ညဘက်သောက်တာ ကောင်းလား၊ မနက်သောက်တာ ကောင်းပါသလား၊ နွားနို့ထဲက မလိုင်တွေကိုပါ သောက်လို့ရပါသလား၊ နွားနို့ထဲကို ဆားထည့်သောက်တာနဲ့ သကြားထည့်သောက်တာကကော ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းပါသလဲ။
ဖြေ ။ နွားနို့က ညဘက်လည်း သောက်လို့ရပါတယ်၊ မနက်သောက်လို့လည်းရပါတယ်။ ညတစ်ခွက်၊ မနက် တစ်ခွက်သောက်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင် ဥပမာ ၁၆ နှစ်အောက်လောက်ဆို ရင် မလိုင်ပါတဲ့ နွားနို့ကိုသောက်လို့ရပါတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်အထက်ဆိုရင် မလိုင်တွေကို ထည့်မ သောက်သင့်တော့ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် နွားနို့ကို ဆားလည်း မထည့်နဲ့၊ သကြားလည်း မထည့်ဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်း ကျိုပြီး သောက်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအရွယ်ကစပြီး အသက်ကြီးတဲ့အရွယ်အထိ နွားနို့သောက်တာ ကောင်းပါတယ်။ နွားနို့ သောက်တာကို ရပ်မပစ်သင့်ပါဘူး။ အားကစားသမားတွေဆိုရင်လည်း နွားနို့ကို ပုံမှန်သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ တစ်ရက် နှစ်ခွက်သောက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
Related Items:Milk, supplements